निमाेनिया देखिएपछि विराट मेडिकल कलेजका डा. कार्कीलाई काठमाडौं लगियाे, टिचिङमा भर्ना - हेल्थ आवाज
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश १ ∕ निमाेनिया देखिएपछि विराट मेडिकल कलेजका डा. कार्कीलाई काठमाडौं लगियाे, टिचिङमा भर्ना
निमाेनिया देखिएपछि विराट मेडिकल कलेजका डा. कार्कीलाई काठमाडौं लगियाे, टिचिङमा भर्ना
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७७ साउन ११ गते, ०९:३७ मा प्रकाशित
विराटनगर-कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएका विराट मेडिकल कलेजका संचालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई काठमाडौं लगिएको छ । शुक्रबार साँझ धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका उनी शनिबार हेलिकप्टर चार्टर गरेर टिचिङ अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा भर्ना हुन पुगेका हुन् ।
छातीमा निमाेनिया देखिएपछि थप उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको कोभिड-१९ नियन्त्रण समन्वय समितिका सयाेजक प्रा.डा. सन्तकुमार दासले जानकारी दिए । कार्कीकाे स्वास्थय अवस्था सामान्य रहेकाे बताइकाे छ ।
बिहीबार महानगरपालिकाको सम्पर्कमा आएका उनलाई शुक्रबार विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो । तर, शनिबार हेलिकप्टर चार्टर गरेर उनी टिचिङको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा भर्ना हुन पुगेका हुन् ।
विराटनगरमा एकैदिन ५० सहित प्रदेशमा ९८ जना संक्रमित थपिए